Iwe unogona ikozvino kumisikidza yetsika kumashure muSafari | IPhone nhau
Iwe unogona ikozvino kuseta yetsika kumashure muSafari
Alex Vicente | 26/09/2021 13:00 | iOS 15, Zvidzidzo uye zvinyorwa, dzakawanda
Iine iPhone 13 inosvika kune vashandisi vayo vekutanga uye iOS 15 ine vhiki yehupenyu, imwe yeshanduko dzinotyisa dzatichava nadzo kana tichishandisa zvishandiso zvedu gore rino iko kugadzirisazve iyo Safari, browser reApple, rave muapp yayo. Bhurawuza rakagadzirirwa kuti zvive nyore kwatiri kufamba uye kukwanisa kuronga ese edu akavhurika tebhu nenzira yakapusa. Asi kwete izvo chete, zvakare inotibvumidza kuigadzirisa zvakanyanya nekuwedzera yetsika kumashure pane yedu iPhone. Isu tinokudzidzisa iwe kuzviita sei.
Kuisa tsika yakasarudzika pane yedu iPhone mune iyo Safari app iri nyore kwazvo uye iwe unogona kushandisa yako pachezvako mifananidzo kana kumisikidza iwo matsva mapikicha ayo Apple akaisanganisira neIOS 15.
Maitiro ekuisa tsika yekumashure muS Safari neIOS 15
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita ndeche vhura itsva isina chinhu Safari tab. Kune izvi unofanirwa Dhinda mativi maviri iri mubhawa iri pazasi kurudyi uye wobva wabaya bhatani "+" izvo zvinozoonekwa mubhawa rimwe kuruboshwe padhuze netabhu dzese dzawakavhura dzakaparadzirwa pachiratidziri.
Tevere, unofanira dzika udzike pasi mune iyo tebhu iyo yakavhurirwa iwe kusvikira iwe wawana iyo Hora bhatani.
Nenzira iyi iwe unopinda ese ekugadzirisa sarudzo ane Safari. Pakati pavo, iwe uchawana iyo toggle Mufananidzo weShure, kuti iwe unomutsa kuti ukwanise kusarudza iyo kumashure yaunofarira zvakanyanya.
Kubaya pane bhatani + Iwe unogona kupinda chero emifananidzo kubva kune yako gallery.
Paunenge iwe wasarudza homwe yawakasarudza, izvi zvicharatidzwa kumashure pamapeji asina, semuenzaniso, iwe paunovhura tebhu nyowani muSafari, iwe unowana iyo foto yakasarudzwa ine yakasarudzika sarudzo idzo dzinoratidzwa nebrowser.
Ini pachangu, ndinofunga kuve nehunyanzvi hwekuita izvi kwakanaka, zvisinei, Handifunge kuti ichave nemhedzisiro yakakura nekuti pamapeji mazhinji atinoshanyira hatizokwanisa kuona kwedu kumashure. Zvakare, ndiani asati atojaira kune chena toni isina ruzha kana uchipinda mubrowser? Tiudze zvaunofunga nezve iyi sarudzo yekugadzirisa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iwe unogona ikozvino kuseta yetsika kumashure muSafari
Kwayedzwa kugona kwemabhatiri eiyo iPhone 13 mushure mekuzvikatanura
Vashandisi veIfree 13 vanotaura zvikanganiso neApple Watch kuvhura